कार्बनफुटप्रिन्ट र उत्सर्जित शंका | Everest Times UK
नेटवर्किङ विस्तारमा संग्लन थप ८ भारतीय पक्राउ, ४२ लाख रुपैयाँ बरामद
कांग्रेसको छायाँ सरकारमा को को मन्त्री बने ?
युद्धग्रस्त मुलुक लिविया पुगी अलपत्र परेका १५ नेपाली नागरिकको उद्दार
स्याङ्जाको माझकोटमा तीन दिने उद्घोषण तथा नेतृत्व विकास तालिम सम्पन्न
बेलायती नेपाली समुदायमा चर्चित गोर्खा कपमा ४२ टिमबीच भिडन्त, करिब १० हजार दर्शक सहभागी हुने अपेक्षा
नेकपाको सचिवालय बैठक एकाएक स्थगित
भारतमा लोकसभाको सातौं चरणको मतदान जारी
त्रिशूलीमा बस झर्दा ५ जनाको मृत्यु, २८ घाइते
लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ को शुभारम्भ, पर्यटकले लुम्बिनी भरिभराउ
बिसीसी युकेद्वारा २५६३ औं बुद्ध जयन्ती मनाउदै
भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक धरौटीमा रिहा
५५ औ विद्यार्थी एकता दिवसमा संयुक्त अखिलको प्रभातफेरी
अल्डरसटमा तेश्रोपटक इम्पावरमेन्ट ईभेन्ट
भुरुङ्दीस्यों बौद्ध तमु समाजले रजत उत्सव मनायो
वातावरणीय समस्यासँग सचेत र व्यवहारमा परिवर्तन जरुरी
तमु फोरमले सन् २०२० भित्र त्रि–भाषीय पुस्तक प्रकाशन गर्ने
कियाचु थरक शाखाको दसौं साधारणसभा सम्पन्न
घान्द्रुक समाज यूकेको एघारौं साधारणसभा सम्पन्न
मुलुकमा अझै अस्थिरता देखिनेतर्फ विश्लेषकहरूको चिन्ता
सोंपाल समाज यूकेको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
प्रेसलाई अंकुश नलगाउ
मर्दीखोला समाज यूकेको ११ औं वार्षिक भेटघाट
तमु समाज यूकेद्वारा सामाजिक भवन खरिद, सहयोगार्थ च्यारिटी डिनर आयोजना
लन्डनमा बुद्धजयन्ती मनाइयो
विश्व च्याम्पियसिप स्नोकर प्रतियोगिताको उपाधि अग्रेज युवा ट्रमलाई
‘मारक्यु’ चलचित्र लमजुङमा
मिडिया काउन्सिल विधेयकको सर्वत्र विरोध, विरोधमा रहेको प्रतिपक्षी कांग्रेसका यस्ता छन् तर्क
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र कम्बोडियाका कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुख भिबोल सेना फिक्डे से छुन्मबीच सिनेट हाउसमा भेटघाट
कार्बनफुटप्रिन्ट र उत्सर्जित शंका
बिहान एली कार लिएर बिहानै आइन् । हामी लाग्दै गरेको आजको गन्तव्यस्थानको बाटैमा पर्छ मेरो घर । गत शुक्रबार हामीले बनाएका थियौँ सँगै जाने योजना । मेरो झोला कारको पछाडि सिटमा फालेर म अगाडि बसेँ ।
‘गुड मर्निङ एली ! कस्ती छौ ? सप्ताहन्त कस्तो बित्यो ?’ मैले कारको सिटबेल्ट लगाउँदै सोधेँ ।
‘चिसो मौसमका कारणले कतै गइनँ । कुकुर डुलाउन बिहान बेलुका डावर नदीको किनारतिर निस्केँ । माफ गर, मेरो कार अलि फोहोर होला है ! के गर्ने कारमा कुकुर राखेर हिँडाउनुपर्छ ।’ कारलाई हाइवेतिर हुइँया हुइँक्याउँदै मलाई पनि प्रश्न गरिन्, ‘तिमी नि ?’
‘म पनि कतै गइनँ । हार्बर हुँदै सामुद्रिक तटैतट मर्निङ वाक गरेँ । समुद्रको छालले सुनाउने सङ्गीत सुन्दै किनारमा भेटिने प्लास्टिक फोहोरहरूसँग संवाद गर्दै ।’ हुईं हुईं गर्दै गुडेका गाडीहरूका दृश्यतिर आँखा घुमाउँदै मैले भनेँ । सबैलाई हामीजस्तै आफ्नो स्थानमा पुग्न हतार छ । त्यसैले त एकले अर्कोलाई उछिनेर अगाडि बढ्दै छन्, थाहै नपाई, पछाडिको एक्जस्ट पाइपबाट वातावरणको घाँटी निमोठ्ने कार्बनडाइअक्साइडजस्ता दूषित ग्यास उत्सर्जन भएको छ भनेर ।
यो कस्तो मूलबाटो हो जहाँबाट हजारौँ मानिस प्रतिघण्टा आवतजावत गर्छन् । तर नमस्कार, कहाँबाट आउनुभएको ? कहाँ जाने हो ? भनी सोध्ने फुर्सद छैन कसैलाई । यो हल्लैहल्लाको मूलबाटो । तर एकान्तमा यो दिनरात लम्पसार परिरहेको छ । झ्यालको सिसा झारेँ एकैछिन फ्रेस हावा लिन । बाहिर खोला सुसाएको जस्तै सुसाइरहेको थियो हाइवे ।
‘त्यसरी मर्निङवाक गर्दा रहेछौ र त यो उमेरमा पनि जवान देखिन्छौ ।’ उनले मिरोरमा आफूलाई हेर्दै सद्भावका शब्दहरू बर्साइन् ।
म गमक्क परेर धन्यवाद दिँदै भनेँ, ‘एउटा कुरा सोधूँ तिमीलाई ?’
‘भन न के हो ?’ उनले जिज्ञासा देखाइन् ।
मैले भनेँ, ‘भो भन्दिनँ, कतै तिमी रिसाउने हौ
सधैँ आफैँले कार चलाएर हिँड्न अल्छी लाग्छ । संसारमा कसैलाई हिँड्दा हिँड्दा दुःख छ भने कसैलाई कारमा चड्दा पनि दुःख नै छ । यस्तै होला है विकसित राष्ट्रको शहरीया जीवन ! आज एलीले मलाई आफ्नो कारमा हालेर हिँडाउँदा धेरै आनन्द आएको छ । त्यसैमा एलीजस्ती सुन्दरी युवतीले हाँकेको गाडीमा बस्न पाउँदा के चाहियो र ! गोरेनी युवतीहरू छालैले राम्रा देखिन्छन् ! गालाको डिम्पल र ब्ल्यान्ड केसले झनै राम्री देखिन्थिन् एली !
‘अगाडि राम्रोसँग हेरेर चलाऊ । हतार नगर । समयमै पुगिन्छ ।’ उनीतिर पुलुक्क हेरेर सावधानी गराउँदै भनेँ ।
उनी भने मलाई देखाउन थियो कि के हो ? निक्कै स्पिडमा हाँक्दै थिइन् । स्पिड लिमिट सत्तरी तर असी माइल प्रतिघन्टामा कार अगाडि बढ्दै थियो । बसका ड्राइभरले आफ्नो नजिकै राम्री तरुनी बसेका छन् भने खुबै हाँक्नुपर्छ नि ! बस, त्यस्तै गरी ।
आधा बाटो काटिसकेका थियौँ होला आकाश खनिन थाल्यो कारको स्क्रिनमा ।
‘डरायौ ? तिमी निर्धक्कै बन । तिमी यताउता भइहाल्यौ भने म सम्हालिहाल्छु नि ।’ उनले कारको रुझेको अनुहार वाइपरले पुछ्दै सान्त्वना दिँदै भनिन् ।
समयमै लन्डन पुग्यौँ । आआफ्ना नाम रिसेप्सनमा दर्दा गरायौँ । आफ्नो नाम अङ्कित ब्याज भिरेर एउटै लाइनको कुर्चीमा वल्तिरपल्तिर बस्यौँ ।
‘फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रद्रर यसले पार्न सक्ने वातावरणीय प्रभाव’ शीर्षक थियो पारि भित्तामा प्रदर्शन गरिएको पावरपोइन्टको ।
घरबाट टेक्स आयो, ‘बिहानै हिँड्नुभएछ आज त, म विस्तारामै हुँदै । तपाईंको कार त यहीँ छाड्नुभएछ ।’
मैले टेक्स फर्काएँ, ‘हो, हामीले कार शेयर गर्‍यौँ । एलीले मलाई ड्राइभ गरेर ल्याइन् । म अहिले एउटा वातावरणीय सेमिनारका लागि लन्डन आएको छु ।‘
‘ए त्यसो पो ! खुबै मज्जा भएछ है ? बाई !’ उताबाट फ्याट्ट रिप्लाई आयो ।
केहीबेर फोनमा आँखा घुमाइराखेँ, उताबाट अरु कुनै रिप्लाई आएन ।
परार एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा सञ्चालित प्रशोधन केन्द्रको मेसिन बिग्रिन जाँदा फोहोरमैलाको ढल विनाट्रिटमेन्ट पानीमा मिसियो । फोहोर पानी नदीमा पस्दा माछाजति सोत्तर परे । मरिनामा राखिएका डुङ्गाहरूलाई प्रदूषणले ठूलो असर पारेको थियो । यहाँ वातावरणलाई प्रदूषण गर्नु अपराध हो भन्ने कानुनी विषयलाई एन्भाएरोमेन्ट एजेन्सीले अनुसन्धान गरेर उक्त कम्पनीलाई अदालतमा उभ्याएको थियो । मुद्दा जितेर बीस मिलियन पाउन्ड पनि जरिवाना तिराउने सफलता मिलेको थियो । त्यो मुद्दा कसरी तयार पारियो, के के सिकियो, तिनै कुराहरू शेयर गर्नु सेमिनारको औचित्य थियो ।
मोबाइलमा फेरि अर्को टेक्सको घन्टी बज्यो, ‘कति बजे आइन्छ त ? सदाकै नर्मल टाइममा होला नि ?’
‘अँ, छ बज्नुअगाडि आइपुग्छु ।’, मैले टेक्स रिप्लाई गरेँ ।
हामी कार्यक्रम सकिएपछि घरतिर फक्र्यौं ।
साँझ एलीले मलाई मेरो घरअगाडि ल्याइपुर्‍याइन् ।
‘एकैछिन भित्र बसौँ । कफी पिएर जाउली ।’, झर्नेबेला मैले अफर गरेँ ।
‘ठीकै छ, अबेर भयो, तिम्रो परिवारलाई डिस्टर्ब होला, धन्यवाद । बरु, बिहान के भन्छु भन्थ्यौ नि, त्यो कुरा भन न, के हो ?’ उनले भनिन् ।
‘भो पछि भनुँला । ऐले भन्ने उचित वातावरण बनेन ।’, भनेर मैले टारिदिएँ ।
बिहान अफिसमै भेट्ने भनी बाई गर्दै उनी हुइँकिन् ।
मैले ढोकाको बेल बजाएँ । साँझको आठ बजिसकेछ । लामो ट्राफिक जाममा परियो हाइवेमा । दुर्घटनाले बाटो बन्द नभएको भए अघि नै आइपुग्ने नि । चाबी निकालेर ढोका खोलेँ ।
उनको काम आज चार बजे सिद्धिनुपर्ने ! ‘कहाँ गइछन् !’ भन्दै फोन गरेँ, लागेन । किचनमा पसेँ, सुनसान थियो । माथि शयन कक्षमा उक्लेँ । ढकढक गरेँ, खुलेन । निलम.. निलम.. भनी चिच्याएँ ।
एकैछिनपछि कसैले घरको मुलद्वार ढकढक गर्‍यो । चाइनिज टेकअवे ल्याएको गोरो केटो रहेछ ।
ए तिमी ? कति हो ?
एघार पाउन्ड पचास पेन्स, कृपया ।
यी, लौ ।
भोक लागेको थियो । स्पेयर रिफ र नुडल खाएँ । अनि टिभी हेर्दाहेर्दै सोफामै निदाएछु ।
अर्को बिहान घडीको अलार्मले निद्रा खोलिदियो । म जुरुक्क उठेँ । थकित जस्तै महसुस भएको पाएँ । उनको ढोका अझै बन्द थियो । म एक कप कफी पिएर हिजोकै सुटमा अफिस लागेँ । अफिस लाग्नुभन्दा अघि एउटा नोट लेखेर टेबुलमा छाडेँ ।
म के साधनको प्रयोग गर्छु मेरो कार्बनफुटप्रिन्ट त्यसमा निर्भर गर्छ । तिमीलाई थाहै छ, कार्बनडाइअक्साइडको वायुमण्डलमा उत्सर्जनको कारण नै जलवायु परिवर्तनको असर हो । हाम्रो अफिसको पोलिसी तिमीलाई विदितै छ, पहिला हिँडेर जानु या साइकल चलाएर । यी दुईबाट पुग्न असम्भव छ भने कि रेल कि बस समात्नू । यी पनि सम्भव हुँदैन भने मात्रै अन्त्यमा कार प्रयोग गर्नू । अन्य सहकर्मी पनि एउटै ठाउँमा जाँदै छन् भने कार शेयर गरेर जानू ।
यसै पोलिसीलाई पालना गर्ने क्रममा म एलीसँगै लन्डन गएको हुँ । हामीले हिजो कार शेयर गर्दा धन्दै २४ किलो कार्बन उत्सर्जन हुनबाट जोगाएका छौँ । जसरी तिमी मेरो जीवनसँगी बनेकी छौ । मलाई लाग्छ, तिमी मजस्तै वातावरण मैत्री पनि छ्यौ ।
तर याद गर कार्वनफुटप्रिन्ट घटाएर वातावरण जोगाउन खोज्दा घरवार नजोगिने भयो भने म अब यस्तो कहिल्यै गर्नेछैन ! हुन्छ, भरे भेटौँला ।
–उही तिम्रो हब्बी
अफिसमा एली कफीका लागि केटलमा पानी बसाल्दै थिइन् । म टुप्लुक्क पुगेँ ।
‘मलाई पनि हो, कफी ?’
‘हिजो के कुरा भन्छु भन्थ्यौ, भन न, प्लिज ।’
‘तिमीले कुकुरहरू पालेकी रहिछौ । यहाँ फुटपाथ र पार्क्तिर कुकुरको गु टेक्दै हिँड्नुपर्छ । उता नेपालका बाटाहरूमा मान्छेका गु किच्दै हिँड्नुपर्छ । तिमीले त उठाउँछ्यौ होला नि तिम्रो कुकुरको गु र हाल्छ्यौ होला ढ्वाङमा ।’
आफ्ना सन्तानभन्दा पनि बढी कुकुरलाई माया गर्ने एलीले आफैँलाई मात्रै कफी बनाइन् । उनी दिनभर बोलिनन् । कार्बनफुटप्रिन्ट घटाउन खोज्दा उता स्वास्नीको ईश्र्या बढ्ने, यता सहकर्मी रिसाउने !
गाह्रो विषय हो वातावरण संरक्षण !
(जनवरी २०१९ फोक्स्टोन, केन्ट, बेलायत)
गफै नबनोस् २०७६